कस्तो अचम्म ! जहाँको पानी नमिसार्इ स्थानीयको खाना पाक्दैन - Everest Dainik - News from Nepal
कस्तो अचम्म ! जहाँको पानी नमिसार्इ स्थानीयको खाना पाक्दैन
परासी, भदौ २८ । पश्चिम नवलपरासीमा एउटा यस्तो पोखरी छ जहाँको पानी नमिसाई त्यहाँका स्थानीयवासीको खाना पाक्दैन् भने पोखरीको माछा खाएमा मृत्यु हुने पौराणिक मान्यता छ । सुन्दा अचम्म लाग्छ र विश्वास पनि हुँदैन तर यो यथार्थ हो ।
पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका वडा नं २ ‘सत्तपत्ती’ भन्ने स्थानमा रहेको चुहाडी पोखरीको पानी स्थानीय थारू समुदायले बिहान-साँझ मिसाएर खाना पकाउने गरेका छन् । त्यो यस्तो पोखरी हो, जसको पानी कहिल्यै सुक्दैन् र पोखरीमा रङ्गीविरङ्गी माछा पाइन्छ तर केवल हेर्नका लागि मात्र । पोखरीकै छेउमा कुँवारवर्ती माईथान मन्दिर पनि छ । यही कारणले सो क्षेत्र पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा परिणत हुँदै गएको स्थानीयवासी बताउँछन् ।
मन्दिर संरक्षण समितिका उपाध्यक्ष ओमनारायण थारूका अनुसार पुरानो जमानामा त्यहाँ सात घर मात्र थारूको बस्ती थियो । सात घरका साथै त्यहाँ ‘सत्त’ अर्थात दैवीय शक्ति रहेकाले त्यस स्थानको नाम पनि सत्तपत्ती रहन गएको उनी बताउँछन् ।
स्थानीयवासी हेमन्ती थारूका अनुसार दैनिक बिहान साँझ सो पोखरीको एक बोत्तल पानी मिसाएर खाना पकाउने गरिएको छ । माईथानमा थारू समुदायकै पुजारीले पूजा गर्दै आएका छन् । स्थानीय बासिन्दा खाना खाएर, मासु खाएर वा महिला महिनावारी भएको समयमा पनि त्यहाँ पस्दैनन् पसेमा माताले दुःख दिने फेरि क्षमायाचना पूजा गरेपछि सन्चो हुने उनीहरूको विश्वास छ ।
याे पनि पढ्नुस मुकुन्दसेन युवा क्लबको तेस्रो साधारणसभा सम्पन्न
त्यस पोखरीमा पहेँलो, कालो, सेतोलगायत रङ्गीविरङ्गी माछा पाइन्छ । ती माछालाई खान त के छुने हिम्मतसम्म स्थानीयले गर्न सक्दैनन् । त्यहाँका माछा खाएमा मृत्यु हुने उनीहरूको भनाइ छ । करीब २५÷३० वर्षअघि तालीमका लागि आएका नेपाली सेनाको फौजले सोही पोखरीमा नुहाउने, पानी पिउने गर्ने क्रममा माछा पनि मारेर खाएका थिए ।
गाउँलेले त्यहाँको माछा खानु हुँदैन भनेर बिन्ती गरे पनि सेनाका जवानले अटेर गरी माछा खाँदा दुई जवानको मृत्यु भएको स्थानीयवासी ओमनारायण थारूले बताए। जवानको मृत्यु भएपछि स्थानीयवासीको आग्रहअुनसार सेनाले त्यहाँ क्षमा पूजा गरेपछि अन्य सिकिस्त बिरामी भएका जवान बाँच्न सफल भएकाले त्यसपछि प्रत्येक वर्ष एक पटक नेपाली सेनाले त्यहाँ गएर पूजा तथा सरसफाइ गर्दै आएको उनले बताए ।
याे पनि पढ्नुस प्रदेश नं ४ र ५ जोड्ने मार्ग खुला
सो क्षेत्रलाई उत्कृष्ट धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थलको रूपमा विकास गर्नका लागि गुरुयोजना नै बनाएर काम अघि बढाइएको उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले बताए । गाउँपालिकाले अहिले त्यसका लागि दश लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको उहाँले जानकारी दिए । -रासस
ट्याग्स: Nawalparasi, Parasi, water